Author: Mikataxe Mekus
Markay arrintu sidaa noqotay buu eygii najisul cayn sharcigu ka dhigay oo weelkii uu taabtay ee afka la galay sidaa in loo daahiriyo uu amray baa yaa waxay noqotay xikmada iyo sawaabta lagama maarmaanka ah bay noqotay.
Abii Daawuudna magiciisa waxaa la yiraahaa Sulaymaan ibn Ashcas asSijistaanii. Taas waxaa maeaam oo la mid ah, subxaananuhuu wa tacaalaa, radiyal Laahu canhu ama raximahul Laah, oo aan doorbidnay vuluuqul Muslimiintu ay u adeegsanayeen weligood inaan u deyno ee aanan waxba turjumin, macnahooduna waa iska cadyahay, Soomaalida badankooduna way fahmayaan. Waa marka la helo weriye KALE oo isaguna xadiiska weriyey.
Sharax Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
Sidaas darteed waxaa dhacda inta badan in sheekhu aanu turjumin kalmadaha qaarkood ee uu carabi ku maro. Markaa daliilkaasuu xukunku ku sugnaaday ijmaaca ah mooyaane xadiiskan maanu ku sugnaanin. Laakiin sida ugu fiicani waxa weeyaan kolba ninkii iyo haweenaydii marqam yihiin inay isla wada qabeystaan.
Baalka sunta watuu iska horreysiinayaayoo biyaha isaga xejisiinayaa oo kaga gaashaamanayaa. Taasi waxay keentay inaan sidan u soomaaliyeyno:.
Saddex kala dardaran bay ahaayeen oo kulligood daciif bay wada ahaayeen. September 25, Buluuq al-Maraam Previous post Next post. Markuu saxaroodo eygu ukumo yaryar bluuqul dixrigaasu uu leeyahay oo aad iyo aad u fara badan ayaa soo baxaysoo saxaradiisa soo raacaysa. Qallajiya oo kolkuu qallalo ayuu iska daahiroobayaa ma aanuu dhihin Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam.
Laakiin hadday biyuhu yar yihiin oo qullatayn ay ka yar yihiin nijaaso waa aqbalayaan weeyaan oo way nijaasoobayaan. Markaa ninkaasu ninkee buu marka noqonayaa? Waxaa kaluu keenayaa biyaha qusaalada la yiraaho ka nijaaso lagu dhaqay weeyaane inaynan najaas ayagu ahayn marka.
Sidii majliskii loo fadhiyey uun buu kacay meel dhinac masjidka dhinacyadiisi ka mid ah oo gudaha ah ayuu kaadi la fadhiistay, dadkii baa ku qeyshay oo ku roorary, inay garaacaan bay rabeen, rasuulkii Allaa ka reebay [inay wax yeelleeyaan].
Waana sidaa uu sheegay oo xadiisku saxiix weeyaan, waxaa saxiix yeelay Albaanii: Taasi waxay keentay inaan sidan u soomaaliyeyno:. Rasuulkii Alle — sallal Laahu calayhi wasallam- badda ayuu wuxuu ka yiri: Laakiin qofka isagoo wax buluuqu edeb darro iyo ciyaala-suuqnimo u samaynaya ,araam, qofkaas marka in lagu xanaaqo oo la adbiyo buu mudanayaa, ka jaahilka isaga in tartiib wax loogu sheego oo loo tartiibiyo ayuu mutaa isagu. Sir Alle uu Rasuulkiisa ogeysiiyey yaa meesha iskaga jirta, markaa waxyaalaha kale ee mustaxdathaatka [la sameeyey] ehee sanaacaatka ihi wax la mid ahoo wax lagu nadiifiyaa wey jiri jireen berrigoodii hore, Ashnaan geed la yiraahiyo oo wax lagu dhaqan jiriyo baa iska jira saabuunina waa jiri jirtey.
Markaa xadiisku saxiix weeyaan.
Markaa kol haddaynan nijaas ahayn hambadeeda in lagu weysaysto, biyuhuu ku weysaysanaayuu usoo qalloociyoo ay ka cabtay weelkiina markaa waxba lagama dhaqin, biyihiina lama daadinin, biyihii wuu ku weyseystay Abuu Qataadah- radiyal Laahu canhu.
Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa.? Marka saddexdaas arrimood marka la isu geeyo; xadiiskii Abuu Saciid Al Khudrii iyo ijmaaca iyo xadiiskan Cabdullahi ibn Cumar- radiyal Laahu canhumaa- baa masalada xukunkeedii oo kaamil ihi inoo soo baxayaa oo waxay noqonaysaa: Haddaan lagu qabeysan karin markaa kumana weyso qaadan karo. Markaa, markuu cabitaan ku dhaco wuxuu gelinayaa kan suntu ay ku jirto, kan dawadu ay ku jirtana kor buu u haynayaa.
Soomaaliyeyntaasi waa mid caan ah oo culumadoo dhani intaan maqlay adeegsadaan xertana la baro. Email required Address never made public.
Eyga arrintaasi ay ku dhacday bjluuqul cudurkaa qaba kol hadday noqotay mid aan la garanayn in eyda kale laga sooco mid aad u culus ay tahay, illeen arrintaasi waxay u baahan tahay wakhti dheer iyo baaris dheer iyo qalab aanay dadkoo dhani wada heli karin. Saddexdaasuba mid waliba kitaab saxiix uu ku magacaabay buu leeyahay, oo way saxiix yeeleen. Labada arrimood ee xun middoodi dhib yar yaa la bu,uuqul. Shawaahid waa wadarta Shaahid. Markaa Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- middii yarayd ayuu doortay oo ahayd inay kaadida nijaasta ahi meeshaa keliya ku koobnaato meeshiina la daahiriyo.
Caqliga saxiixa ah iyo cilmiga sugan ma aha nadariyaatka [aragti, theory] dadka qaarkood ay rumeysan yihiin ee aan la xaqiijinin ee cilmiga xaqiiqiga ah marna sharciga ma khilaafaan.
Next story ASSEMBLAGE LAMELLO PDF
Previous story JANRAL NOLEJ GUJARATI 2014 PDF